Thibaut Courtois oo heshiis lagaaray kooxda Real Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Thibaut Courtois oo heshiis lagaaray kooxda Real Madrid
(18-7-2018) Wargeys kasoo baxa dalka Spain ee RMC Sport ayaa daaha ka qaaday in kooxaha Chelsea iyo Real Madrid ay isku afgarteen isla markaana heshiis rasmi ah ka gaadheen saxiixa goolhayaha Blues ee Thibaut Courtois kaas oo mudooyinkii u dambeeyay si weyn loola xidhiidhinayay inuu kusoo laaban doono Madrid.
Goolhayaha ree Belgium ayaa noqon doona saxiixii ugu horeeyay ee xiddig wayn ah oo uu sameeyo tababare Julen Lopetegui haddii uu si rasmi ah u dhammaystiro heshiiska uu ugu soo biirayo Los Blancos, Warkan ayaana ah mid farxad u ah kooxda maadaama ay sanadihii ugu dambeeyay si weyn suuqa uga raadinayeen goolhaye badala Keylor Navas oo da’diisu weynaatay.
RMC Sport oo faahfaahinaysa heshiiska uu Courtois ku imanayo Estadio Santiago Bernabeu ayaa sheegtay in goolhayuhu uu kooxda si rasmi ah ugu saxiixi doono marka uu kasoo laabto fasaxiisa xagaaga oo uu dhawaan galay kaddib markii uu kaalinta saddexaad keenay xulkiisa Belgium tartankii koobka aduunka isla markaana hantay abaalmarinta gacanta dahabka ah ee “Golden Glove”.
Wargeysku wuxuu intaa ku darayaa in lacagaha ay labada kooxood isku afgarteen ay tahay 35 Milyan taas oo ah lacag aad uga jaban midii ay Los Blancos suuqyadii hore ku raadinaysay goolhayaha Manchester United ee David De Gea.
Goolhaye Thibaut Courtois ayaa wax fursad ah u diiday kooxdiisa haatan ee Chelsea isaga oo la fahamsan yahay inuusan siinin fursad ay wada xaajood ku yeeshaan, Heshiiskiisa ayuu ka hadhsan yahay kaliya hal sano taas ayaana ku qasabtay in Chelsea ay heshiis la gaadho Real Madrid.
Haddii Real Madrid ay goolhayahan kasoo qaadato dhigeeda Chelsea ayay sidoo kale fursad weyn u tahay kooxaha Paris Saint-Germain, Liverpool iyo xataa Chelsea oo dhexdooda dagaal u gali doona goolhayaha 70 Milyan lagu qiimeeyo ee kooxda AS Roma ee Alisson Becker.